a - TECHNOMANIAC's - BLOG: Last Minute Preview on the Big Cat
Last Minute Preview on the Big Cat
မနေ့ကပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပရီဗျူးရေးမယ်ဆိုပြီး အချိန်မရလို့ခုမှ ရေးလိုက်ရတယ်။ OSX Leopard ရဲ့နာမည်ကြီးသင့်မှုဟာ အိုင်ဖုန်းကြောင့် နည်းနည်းသေးသိမ်သွားတယ်ထင်ရပေမဲ့ အခုဆိုလူတော်တော်များများက စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပန်းသီးရဲ့ ဒီသုံးချင်စရာကောင်းလှတဲ့ Operating System အသစ်စက်စက်ကို Geeks တွေ၊ Students တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ Windows ရဲ့ စူပါစမတ် Developers တွေပါမကျန် အကုန် စောင့်နေကြပါတယ်။ ကံကောင်းတဲ့ လူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ကြိုတင်မှာယူထားတဲ့ ခွေတွေ ရနေပါပြီ။ Screenshots တွေ စတင်နေပြီဖြစ်သလို၊ နည်းပညာနယ်ပယ်က Geek ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Pogue, Mossberg, Baig တို့ကလည်း အချိန်မှီ ပရီဗျူးတွေထုတ်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ ပြောတဲ့အထဲက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊ ၀ဗ်ဆိုက်ပေါ်မှာ မဖော်ပြထားတဲ့၊ လူသိပ်မသိသေးတဲ့ အချက်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
- Compatibility ပြဿနာတွေဟာ မရှိသလောက်ပါပဲတဲ့။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်၊ အပ်ဂရိပ်လုပ်၊ ပြန်လာတာနှင့် သုံးလို့ရနေပါပြီတဲ့။ ၀င်းဒိုး ကြီး ပျက်သွားမှာလည်း မပူပါနှင့်တဲ့။ XP/Vista အရင်ကသွင်းထားတဲ့လူတွေဆိုလည်း အဲ့ဒီအပိုင်းက ဘာမှ မထိပါဘူးတဲ့။ အရင်က ဗစ်စ်တာမှာ သုံးမရတဲ့ ပရင်တာတွေတောင် သုံးလို့ရလာတယ်ပြောပါတယ်။ Drivers တွေ ကောင်းကောင်း ထောက်ပံ့ပေးထားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။
- နောက်ပြီး ဟာ့ဒစ်စ် ကို Real Time Partition ပိုင်းနိုင်၊ ချုံ့နိုင်၊ ချဲ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ သင့်ရဲ့ဒေတာတွေ မဆုံးရှုံးစေပါဘူးဆိုပဲ။
- ပရိုဂရမ်တွေ တက်တာ၊ အရမ်းမြန်တယ်ဆိုပါတယ်။ iCal တို့ iPhoto တို့ ဆိုရင် Instant လို့တောင်ပြောပါတယ်။ စက်အဟောင်းတွေတောင် သုံးရတာပိုမြန်လာပါတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။
- မသိတဲ့ အကြောင်းအရာကို Search လုပ်တဲ့အခါ Menu / MenuItems တွေထဲထိပါ ရှာပေးပါတယ်။
- PDF Icon လေးက တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ Coverflow မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ စာမျက်နှာ ၁ရွက်ပဲရှိတဲ့ ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်ဆိုရင် စာရွက်ခေါက်လေး ၁ရွက်ပဲပြပါတယ်။ ၂ရွက်ထက်ပိုရင် စာအုပ်ပုံလေးဖြစ်သွားပြီး ပထမစာမျက်နှာနှင့် ဒုတိယစာမျက်နှာလေးကို ခပ်လှစ်လှစ်လေး ပြထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကျပါလေ့။
- အိုင်ချတ်မှာ GoogleTalk ရပါတယ်လို့ confirm လုပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအပေါ်ကအချက်တွေ က ကျွန်တော် ဖိုရမ်တွေမှာ ထပ်တွေ့တဲ့ အရာတွေပါ။ နောက် ကျွန်တော် Tom Yagar ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။ အောက်မှာတော့ နည်းနည်းဘာသာပြန်ပြီးရေးထားပါတယ်။ သူက infoWorld ရဲ့ အယ်ဒီတာ ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ စာနယ်ဇင်းနယ်ပယ်မှာ ဂိခ်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သာမန်လူတွေ OS သုံးခုလောက်သူးဖူးတာကို သူကသနားပါတယ်တဲ့။ PC စပေါ်ကတည်းက စမ်းသုံးလာလိုက်တာ သူ့အတွေ့အကြုံက မနည်းဘူးလို့ ချီးမွမ်းခံရတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးပါ။ သူက အခုလို ပြောပါတယ်။
ကွန်ပျူတာရှုထောင့်ကပြောရမယ်ဆိုရင် ၀င်းဒိုးနှင့် လင်းနပ်စ် ဟာ Mac OS X နှင့် တကယ့် Core ကနေ တည်ဆောက်ထားတာခြင်းတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက သူတို့ရဲ့ အလွှာလိုက်တည်ရှိနေတဲ့ kernels တွေ ၊ APIs တွေပါပဲ။ အလွှာတစ်ခုဟာ အောက်ကအလွှာကို abstract လုပ်ပါတယ်။ Class တွေ တစ်ခါဆောက်လိုက်ပြီးတိုင်း အောက်က အလွှာကို နားလည်ရလွယ်အောင်ဆိုပြီး နောက်တစ်လွှာထပ်အုပ်ပါတယ်။ ရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်သုံးရလွယ်အောင်၊ ၀င်ပေါက်သဘောမျိုး ပွိုင့်တွေ၊ abstract class တွေ ( interface လည်းခေါ်ပါတယ် ) ထားခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာက ကြာလေကြာလေ API အလွှာကြီးကထူလာတာမျိုးတို့၊ နောက်ပြီး ငါထားခဲ့တဲ့ class ၊ ၀င်ပေါက်က နင့်ဟာထက်ပိုကောင်းတယ်စတဲ့ Debate တွေဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အလွှာတစ်ခု Implement လုပ်တိုင်းမှာ မှီခိုမှု ( dependancies ) ၊ သွေဖယ်မှု ( deprecations ) ၊ ထပ်တူ၊ ဆင်တူကျမှု ( peculiarities ) တွေ ပိုပိုများပြီး ရှုပ်ထွေးမှုတွေ စလာပါတယ်။ Documentation တွေ ထူသထက်ထူလာပြီး သင်ယူရပိုခက်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
OS X မှာ ကျတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ Framework ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ သူက အပေါ်ကို တက်တက်သွားတဲ့ ပုံစံမဟုတ်ပဲ၊ Framework ကို ရေပြင်ညီ အလျားလိုက် ချဲ့ထွင်တဲ့ သဘောပါ။ အဲ့ဒီ Framework အောက်မှာတော့ ခပ်ရှင်းရှင်း၊ ခပ်ပါးပါး၊ စနစ်တကျရှင်းလင်းစာတမ်းပြုစုထားတဲ့ System Kernel လေး ၁ခုပဲရှိပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတွေဟာ Framework ကို ချဲ့လို့ရပါတယ်။ Framework ဟာ OS X ပါပဲ။ သူ့ကို အပေါ်ကနေထပ်အုပ်ပြီး Abstract Layer လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ iCal, Contact, Finder စတဲ့ objects တွေကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Framework ပေါ်မှာ ဘယ်နေရာက မဆိုခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်။ Objective-C, C++, Java ဘာ နှင့်ပဲရေးရေး အဲ့ဒီ Object တွေကို ယူသုံး၊ ပြီးရင် Object တွေ အချင်းချင်း messages တွေပို့၊ function call တွေလုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရုံပါပဲ။ System ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ hardware configuration တွေ တောင်မှ objects တွေ အနေနှင့် သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဘက်ထရီ တုံးလေး အားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ HW Specific တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ခေါ်သုံးပြီး ကြိုက်သလို ကလိခွင့်ရှိပါတယ်။
Leopard က လှပတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ မြင်နေရတဲ့ Eye-Candy အနုအရွတွေကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံကိုက သပ်ရပ်နေတာပါ။ Core ကိုယ်တိုင်က Unix Standard ဖြစ်သွားပါပြီ။ အပျော်ကြိုက် OS လို့ ခေါ်တာကို ရပ်လိုက်ပါတော့။ နောက်ပြီး User တွေပြောတာကို နားထောင်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ စနစ် ၁ခုပါ။ ကျွန်တော်တစ်ချိန်တုံးက ပြောဖူးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ OS က ဘာလို့ နက်ဝက်ခ်ပေါ်က ကွန်ပျူတာတွေကို ရှာဖွေခွင့်မပေးတာလဲဆိုပြီးမေးဖူးတယ်။ အခုအဲ့ဒါတကယ်ရလာပါပြီ။ နောက်ပြီး Dock ကို ဘေးမှာ ထားရင် အဲ့ဒီ 3D Dock ကြီးက မလှဘူးဆိုတာ၊ ဒါကိုလည်း သူတို့နားထောင်ပြီး အခုပြင်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခု ပြောနေတာတွေကို Mac မကြိုက်တဲ့လူတွေကိုပြောရင် သိပ်ဘ၀င်ကျမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို OS တစ်ခုဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက်အလုပ် မြန်မြန်ပြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောရင် တူတူပဲလို့ပြန်ဖြေပြီး ငြင်းလွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ထွက်သမျှ OS နီးပါးသုံးဖူးပြီးပါပြီ။ အခုခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဗစ်စ်တာထွက်တုံးက လူတွေက ဒီလောက် စောင့်မျှော်မနေဘူး။ ကွန်ပျူတာအသစ်တွေမှာ ပါသွားလို့သာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အုတ်အောသောင်းနင်းဖြစ်သွားတာပါ။ Windows users တွေက Upgrade လုပ်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ အခု Leopard ကို ပန်းသီးပိုင်ရှင် ကွန်ပျူတာ သမားမဟုတ်တဲ့လူတွေတောင် Upgrade လုပ်ဖို့တာစူနေပါပြီ။ Designed for Leopard ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က သန်း ၂၀နီးပါး ကွန်ပျူတာတွေဟာ OSX 10.5 ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ မ၀ယ်ချင်သေးရင်လည်း စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ တဆင့်စကား တဆင့်နားနှင့် ခင်ဗျားတို့ ကောင်းသတင်းတွေ ကြားရပါလိမ့်မယ်။
အဟမ်း၊ ကြော်ငြာသံလေးတွေကို နားငြီးတဲ့လူတွေကတော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ .. .အိုး .... ၁၀ မိနစ်ပဲလိုတော့တာပဲ။ ခြောက်နာရီထိုးဖို့။
Go and get your Leopard! (From ZOO!) :P
Posted by Wai Phyo at5:52 PM
Leopard Review - Finally, I have played on it !
Reminders : Crunch'em
Quick Mac Bites : 25/10/07
Woots - Fat Apple's Fiscal Year 07 Ended
Quick Mac Bites : 19/10/07
I'm notaMac-news-reporter :|
OS X Leopard Release Date = 26th Nov | Apple Start...
15th October = Blog Action Day !
Zawgyi Myanmar Keyboard for Mac OS X
Environment - Al Gore - Apple
Teens - Web 2.0 - Where are you?
Fix : Rendering Burmese Fonts on OS X
A cup of Java - Eclipse 'cino
Teens - Brands - Apple
Venture Capitalists : Changing Era
Leopard Seeds .... It's October, folks.
UOB .... oh .... UOB